Electric Skateboards ike Mee agba Iberibe - Jomo Technology Co., Ltd
Mgbe isi ụdị pụtara dị na ahịa, ha e nanị kwesŽrŽ-eji dị ka nwa afọ iga, ịbụ ukwuu n'ihi na mgbe ị chọrọ ịga a enyi ụlọ, ka ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ n'ụzọ. Nke a ngwa ngwa electric skateboardabịa na a n'azụ diski breeki, oke pneumatic ụzọ taya na na kwadoro site na a Brushless Hub Motor 350W * 2 na 20pcs18650 High ọnụego lithium mkpụrụ ndụ ịwagharị gị obodo na a ala n'etiti ndọda imewe! Mgbe ị ga-nyochawa ịbụ ndị ruru eru nke gbanwee batrị, ọ bụghị a na-ekpo ọkụ swappable ntọlite, otú ị ga-n'ụzọ nkịtị unscrewing mkpọ na-etinye na a ika ọhụrụ. Na okwu nke ike, ya anya ka o nwere ike abịa pụtara a ntụmadị dị ka ọ bụ ike nweta n'elu gbapụrụ ọsọ nke 26mph. Ọ na-eme ojiji nke Manta Drive etu esi nke na-adịghị eji gearing ma ọ bụ eriri. Ọ na-e-eji na ụdị nile nke terrains, ịbụ onye kasị elu nke obi ụtọ na-achọ na mkpa iji nweta oké gbapụrụ ọsọ na okomoko terrains.
Site n'ụzọ nke na-aga ngwa ngwa na-efe efe n'elu ugwu ntà nile, na-enwe elu ihe ara ukwu nke voltaji na a nnukwu moto ga niile mmeri, Otú ọ dị na ị chọrọ gị skateboard anya na ahụmahụ dị ka onye dị ka ihe n'ụzọ dị irè. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị ga-achọ ihe electric skateboard na bụ obere, ịdị nwayọọ, na e ala na-eri, na- Roto-gbalaga (KOOWHEEL ika) electric skateboard bụ gị nhọrọ kasị mma n'ihi na ugbu a. The Roto-gbalaga skateboard online shop na-enye gị a na usoro nke electric hoverboard , gụnyere abụọ wheel onwe guzozie skuuta , mpịachi electric skuuta na ekpo ọkụ ugbu ụkwụ anọ electric longboard . Ugbu a, na anyị nwere ọ bụla akụkụ mmeghe ahụ n'ụzọ, anyị na-aga lelee elu àgwà na magburu onwe arụmọrụ electric skateboards inweta si n'ebe, na-ahụ price ha mkpọsa na Roto-gbalaga ahịa.
Ọtụtụ n'ime ndị a ọhụrụ electric hoverboard na-achịkwa a remote, Bluetooth anya, nke na-enyere gị mee ngwangwa ma ọ bụ breeki na onye kensinammuo thumbwheel, na ya nwekwara ikanam egosi na-egosi na ị na otú a otutu ihe ọṅụṅụ ị nwere ike hapụrụ gị electric skateboard. Otu n'ime ọtụtụ coolest atụmatụ nke Roto-gbalaga ( Koowheel ) bụ na ya ngwa na-enye ohere agba iji dochie femụwe nke osisi-ejighi eriri site n'ụzọ nke Bluetooth. N'ezie, nke a bụ nnọọ crude nhọrọ tụọ arụmọrụ na-agaghị ekwu Ọkọlọtọ nke osisi na nhọrọ nke mbadamba na-adịghị na-ewere.
Post oge: Mar-15-2018